Ingiriiska Oo Ka Hadlay Weeraro Lagu Qaaday Dalka Suuriya.
Saturday April 14, 2018 - 11:19:05 in Wararka by
Ra'isal wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa ka hadashay weeraro ay ciidamada Ingiriisku ka fuliyeen qaybo kamid ah wadanka Suuriya.
Ra'isal wasaare Theresa May ayaa sheegtay in ay fasax u siisay ciidamada cirka ee dalka Ingiriisku inay weeraro ku qaadaan goobo kamid ah wadanka Suuriya, meelahaas oo ay sheegtay in ay yaalaan waxyaalo Kimiko ahi , gaar ahaana hubkii lagu sumeeyey dadka shacabka ah ee reer Suuriya.
dhanka kalena wasiirka Difaaca dalka Ingiriiska ayaa isna sheegay in afar kamid ah diyaaraddaha dagaalka ee Wadanka Ingiriisku duqayn ka geysteen wadanka Suuriya, kuwaas oo kasoo duulay saldhiga ay ku lee yihiin Akrotiri, waxaanu intaas ku daray in ay isla saldhigii ku noqdeen markii ay hawlgalkaasi sameeyeen, isaga oo cadeeyey in saldhigyadda ay duqeeyeen diyaaraddahaasi ay ku yaalaan magaaladda Xumus ee dalka Suuriya ,gaar ahaana saldhig uu sheegay in ay yaalaan hub kimiko ahi.
ciidamada Ingiriiska ayaa ku biiray ciidamo ay hogaaminayaan dawladdaha Maraykanka iyo Faransiisku, kuwaas oo hawlgalo ka fulinayey goobo kamid ah Suuriya, goobahaas oo la sheegay in ay yaalaan hub kiimiko ah oo dhowaan la sheegay in lagu weeraray magaaladda Douma ee dalkaasi ku taala.
May oo ka hadlaysay gurigeeda ayaa sheegtay in weeraradani ay yihiin kuwo lagu difaacaayey dadka shacabka ah ee aanay ahayn kuwo loogu jeeday in lagu dhex galo dagaaladda Sokeeye ee ka socda Suuriya, waxa kale oo ay sheegtay in aanay doonayn in ay meesha ka saaraan taliska Suuriya ka taliya.